सीपीए बनाम एमबीए: Which is Better For Your Career & तलब? [2018 अद्यावधिक]
सीपीए बनाम एमबीए: जो एक तपाईंको क्यारियर लागि राम्रो छ & तलब?
23 अगस्ट सीपीए बनाम एमबीए: जो एक तपाईंको क्यारियर लागि राम्रो छ & तलब?
Updated:अक्टोबर 21, 2018
जब लागि जाँदै बीच निर्णय कलेज विद्यार्थीहरू अक्सर आफूलाई भ्रमित पाउन आफ्नो सीपीए लाइसेन्स वा एमबीए डिग्री कमाउन. सही विकल्प फेला गर्न प्रमुख आफ्नो क्यारियर लक्ष्य र आफ्नो व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू को एक मूल्यांकन मार्फत छ. बरु सल्लाह लागि अरूलाई हेर्दै को, यो तपाईं समय लाग्न र आफ्नो भविष्य योजना सोच्न कि बेहतर छ. तपाईं एक निर्णय गर्न मद्दत गर्न, तपाईं आराम गर्न सक्छन् भनेर गरेको प्रत्येक मूल कुराहरू हेरौं र केवल आफ्नो भविष्य सम्भावनाहरू विचार.
एक एमबीए के हो?
सीपीए बनाम एमबीए: क्यारियर पथ
सीपीए बनाम एमबीए: तलब
सीपीए बनाम एमबीए: प्रमाणीकरण लागत
सीपीए बनाम एमबीए: समय आवश्यकताहरु
त्यसैले, जो एक तपाईं को लागि राम्रो छ?
एक प्रमाणित सार्वजनिक मुन (सीपीए) एक वित्तीय accreditation प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार को अमेरिकी संस्थान द्वारा सम्मानित गरिएको छ (AICPA). यो प्रमाणीकरण वित्त उद्योग ठूलो उपलब्धि को एक चिन्ह रूपमा मान्यता छ. तपाईं चाहनुहुन्छ भने एक सीपीए बन्न, तपाईं AICPA द्वारा आयोजित छ कि एक परीक्षा पास गर्नुपर्छ. को सीपीए परीक्षा राम्ररी लेखा को कोर अवधारणाहरु मा एक तपाईं तयार र आफ्नो समझ र लेखापरीक्षण र लेखा को फिल्डमा यो सिक्ने लागू गर्न सक्ने क्षमता परीक्षण. एक सीपीए कर व्यवस्था प्रश्न मा एक विशेषज्ञ वा मानिसहरूलाई कर सल्लाह प्रदान हुन मानिन्छ. तपाईं एउटा सानो वा ठूलो दृढ मा वा आफैलाई लागि काम अवसर को खुला विकल्प हुनेछ.
व्यापार प्रशासन एक मास्टर व्यापार कलेज द्वारा प्रस्तावित दुई वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम तपाईं व्यापार को क्षेत्र को लागि तयार सामान्यतया छ. एक एमबीए सबै व्यवस्थापन भूमिकाको मा एक सामान्यिकृत अध्ययन हो र तपाईं व्यवस्थापन को क्षेत्र मा एक आला बनानु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो अनुकूल छ, विशेष गरी मार्केटिङ. विद्यार्थीहरूले उद्योग मा विशेष एकाग्रता र महत्त्व आफ्नो क्षेत्र निर्भर गर्दछ भाग-समय र दूरी सिक्ने प्रक्रिया मार्फत डिग्री मार्ग पछ्याउँदा गर्न खुला छन्. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, वित्त, मार्केटिङ, मानवीय संसाधन, र अपरेसन (व्यवस्थापन विश्लेषण र रणनीति संग सम्बन्ध मा). को एमबीए अध्ययन कार्यक्रम वित्त प्रतिबन्धित छैन र अर्थशास्त्र जस्तै विषयहरू समावेश, मार्केटिङ, संगठनात्मक व्यवहार र मात्रात्मक विश्लेषण.
एक सीपीए रूपमा, आफ्नो काम शीर्षक समावेश हुन सक्छ: CFO, लेखापरीक्षक, कर सल्लाहकार वा अदालती लेखापाल. एक एमबीए लागि अध्ययन को क्षेत्रमा देखि थप व्यापक-लिएर हो, त्यहाँ थप क्यारियर छनौट हो. तपाईं एक सीपीए लाइसेन्स छ भने, आफ्नो विकल्प लेखा र वित्त मा केन्द्रित हुनेछ. तपाईंले तिनीहरूलाई दुवै प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो निपटान मा विश्व छन् छौँ.
तपाईं एक एमबीए छ भने, तपाईं क्यारियर अवसर मा एक ठूलो विकल्प, depending on your area of specialization. तपाईं एक एमबीए छ भने, तपाईं एक प्रबन्ध सल्लाहकार रूपमा काम गर्न सक्छ, मार्केटिङ प्रबन्धक, लगानी बैंकर, मुख्य सूचना अधिकारी, अपरेसन प्रबन्धक वा वित्तीय सल्लाहकार.
यसलाई भइरहेको एक एमबीए वा सीपीए थप क्यारियर ढोका खोल्न र सम्भावित कमाउन वृद्धि गर्न सक्ने कुनै ठूलो गोप्य छ. र जहाँ तपाईं केही प्रभाव पार्न हुनेछ काम अनुभव वर्ष. तपाईं एक सीपीए हुनुहुन्छ भने तपाईं लगभग कमाउन हुनेछ 10% आफ्नो गैर सीपीए समकक्षों भन्दा बढी. एक सीपीए लागि औसत तलब छ $62,123 प्रति वर्ष. अर्कोतर्फ, स्थान एक एमबीए लागि क्षतिपूर्ति मा एक ठूलो भूमिका खेल्छ - स्कूल तपाईं उपस्थित कि अर्थ (राष्ट्रिय स्तर मा आधारित) तपाईंले कति असर गर्न सक्छ. तथापि, आफ्नो एमबीए कमाउन पछि पहिलो वर्षको लागि, तपाईं को औसतमा रोजगार प्रस्ताव प्राप्त आशा गर्न सक्छौं $50,427. कि underwhelming लाग्न सक्छ गर्दा, तपाईं कार्य अनुभव हासिल एकदम रूपमा आफ्नो आय क्षमता वृद्धि देख्ने मन राख्न. औसत मा, तपाईं एक एमबीए छ भने, तपाईं यो प्रमाण बिना आफ्नो साथीहरूको भन्दा बढी sizable उठ्छ र प्रगति आशा गर्न सक्छौं.
यो एक सीपीए बन्ने मा मूल्य ट्याग राख्न गाह्रो छ. तपाईं आफ्नो स्नातक डिग्री प्राप्त स्कूल मा शिक्षण समीकरण को भाग हुनेछ. कि माथि, तपाईं कुनै पनि बन्ने पाठ्यक्रम संग सम्बन्धित लागत तपाईं सीपीए परीक्षा लागि तयार लिन सक्छ हुनेछ. तपाईं यस बारे खर्च हुनेछ आंकडा गर्न सक्नुहुन्छ $2,000. परीक्षा नै सन्दर्भमा, को लागत अवस्थाबाट राज्य गर्न व्यापक उतार चढाव. केही अमेरिका द्वारा कति खण्ड तल भङ्ग भएको एक दर्ता शुल्क छ(को) परीक्षा को लागि बस्न योजना. त्यहाँ retakes लागि थप शुल्क हो. (तपाईं लेखा को आफ्नो राज्य बोर्ड संग जाँच गर्न आवश्यक हुनेछ।) औसत मा, यसको बारेमा खर्च हुनेछ $1,500 सबै चार खण्डहरू लागि बस्न. अन्तमा, त्यहाँ लाइसेन्स नै लागत छ, जो बारेमा औसत $150. कि भूल छैन आफ्नो लाइसेन्स कायम गर्न, तपाईं जसको लागि तपाईं लागत थप लाग्न हुनेछ नियमित रूपमा CPE पाठ्यक्रम धाउन आवश्यक हुनेछ. केही अमेरिका, कनेक्टिकट जस्तै, आवश्यक 40 CPE घन्टा हरेक वर्ष. त्यो रूपमा धेरै खर्च गर्न सकेन $4,000 प्रत्येक वर्ष शिक्षा जारी मा. एक एमबीए कमाउन को लागत अत्यधिक चल र जस्तै कारक निर्भर: भौगोलिक स्थान, सार्वजनिक संस्था बनाम निजी, घण्टा नम्बर आवश्यक, आदि. यस्तो अनलाइन सामाग्री गर्न पुस्तकहरू र / वा पहुँच अन्य लागत मा आंकडा, प्रविधि लागत, पाठ्यक्रम अध्ययन र योजना भने मा-क्याम्पस बाँच्न, कोठा र बोर्ड को लागत. शिक्षण को एक औसत लागत वरिपरि छ $58,000. अन्य विचार आय र कार्य अनुभव तपाईँले चयन यदि तपाईं forego हुनेछ पूर्ण-समय विद्यार्थी बन्न छन्. त्यो किन भाग-समय छ, अनलाइन र, त्वरित एमबीए कार्यक्रम यति लोकप्रिय बनेका छन्.
बन्ने एक सीपीए अब छ लिन्छ धेरै पुग्दैन. तपाईं पूरा हुनुपर्छ 150 स्नातक क्रेडिट घण्टा र केही अमेरिका आवश्यकता तपाईं पनि एक सीपीए को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण अन्तर्गत काम घण्टा दिइएको नम्बर हुनु पर्छ भनेर. तपाईं पनि हुनेछ 18 लागि बस्न र पारित गर्न महिना को सीपीए परीक्षा को सबै चार भागहरु. कुल यसको बारेमा लिन सक्छ 8 1/2 एक सीपीए बन्न वर्ष (जस्तै. स्नातक काम पाँच वर्ष, काम दुई वर्ष र 18 को सीपीए परीक्षा पास गर्न महिना।) त्यहाँ एक एमबीए डिग्री कार्यक्रम पूरा गर्नको लागि कुनै विशिष्ट TIMEFRAME छ. यो तपाईं पूर्ण वा भाग-समय अध्ययन यदि निर्भर हुनेछ लिन्छ कसरी लामो र तपाईं परिसर कक्षाहरू धाउन वा तिनीहरूलाई अनलाइन लिन भने. केही विद्यालय पनि जो डिग्री पूरा गर्न को लागि आवश्यक घण्टा केही बन्द दस्तक गर्न सक्नुहुन्छ काम अनुभवको लागि क्रेडिट दिन. एक एमबीए कार्यक्रम एक मालिक डिग्री कार्यक्रम छ देखि, तपाईं समाप्तिमा पारित गर्न आवश्यक हुनेछ भनेर प्रमाणीकरण परीक्षा को कुनै प्रकार छ. तपाईं बस आफ्नो कार्यक्रम देखि स्नातक. औसत मा, यसले लिन्छ 2-3 एक एमबीए कार्यक्रम पूरा गर्न वर्ष.
तपाईं व्यवस्थापन अवसर वा सामान्य व्यापार परामर्श रुचि राख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि एक एमबीए राम्रो विकल्प हुनेछ. अर्कोतर्फ, तपाईं कडाई एक "संख्या cruncher छन् भने,"तपाईं एक सीपीए बन्न गर्नुपर्छ, तपाईं एक ठूलो चार लेखा दृढ लागि काम गर्न चाहन्छु, विशेष गरी यदि. तपाईं व्यापार सञ्चालनका राम्रो समझ र थप उद्योगहरूमा employable बन्न चाहने एक सीपीए हुनुहुन्छ भने, एक एमबीए रही उपयोगी हुनेछ. त्यसै गरी, यदि तपाईं वित्त मा एक एकाग्रता भएको एमबीए प्राप्त र कर्पोरेट वित्त वा कराधान विशेषज्ञ योजना, यसलाई मा जाने सिद्ध अर्थमा बनाउँछ एक सीपीए बन्न. त्यहाँ सीपीए quandary बनाम एमबीए गर्न कुनै समाधान छ. त्यहाँ एक वा अन्य वा दुवै भएको र बेफाइदा वर्णन कि अनुसन्धान को एक exhaustive शरीर छ. एक एमबीए भएका मानिसहरूलाई नेटवर्क र भाषण, सीपीए वा दुवै र के सल्लाह तिनीहरूले प्रस्ताव हेर्न. के तपाईं लागि सबै भन्दा राम्रो के निर्णय र विचार आफ्नो चासो मा लिन छ, कौशल, आर्थिक र क्यारियर उद्देश्य.
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, विशेष छुट, गहिरो छुट 33 आज प्रयोग
अन्तिम प्रयोग 17 सेकेन्ड पहिले
म्याद समाप्त हुने मिति: अक्टोबर 26, 2018
सीपीए, Surgent सीपीए समीक्षा, विशेष छुट 41 आज प्रयोग
अन्तिम प्रयोग 12 मिनेट पहिले
म्याद समाप्त हुने मिति: अक्टोबर 24, 2018
सीपीए, विले CPAexcel, विशेष छुट 34 आज प्रयोग
अन्तिम प्रयोग 10 मिनेट पहिले
सीपीए, विले CPAexcel, विशेष प्रस्ताव 34 आज प्रयोग
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, विशेष छुट 41 आज प्रयोग
म्याद समाप्त हुने मिति: अक्टोबर 21, 2018
सीपीए, Surgent सीपीए समीक्षा, गहिरो छुट 34 आज प्रयोग
अन्तिम प्रयोग 24 मिनेट पहिले
सीपीए, विशेष छुट, छिटो अगाडि एकेडेमी 41 आज प्रयोग
म्याद समाप्त हुने मिति: अक्टोबर 25, 2018
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, गहिरो छुट 33 आज प्रयोग
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, गहिरो छुट 37 आज प्रयोग
सीपीए, Yaeger सीपीए समीक्षा, विशेष छुट 40 आज प्रयोग
सीपीए, Gryfina, विशेष छुट 37 आज प्रयोग
म्याद समाप्त हुने मिति: अक्टोबर 27, 2018
सीपीए, Gleim सीपीए समीक्षा, विशेष छुट 41 आज प्रयोग
सीपीए, विले CPAexcel, विशेष छुट 40 आज प्रयोग
सीपीए, Surgent सीपीए समीक्षा, Webinar 34 आज प्रयोग
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, वित्त प्रस्ताव 39 आज प्रयोग
सीपीए, Surgent सीपीए समीक्षा, निःशुल्क परीक्षण 38 आज प्रयोग
सीपीए, रोजर सीपीए समीक्षा, अन्य 37 आज प्रयोग
सीपीए, विले CPAexcel, अन्य 35 आज प्रयोग
सीपीए, विले CPAexcel, विशेष छुट 38 आज प्रयोग